अदालतमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भन्ने वकिलहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यसरी झपारेर पठाए... | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
अदालतमा हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भन्ने वकिलहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यसरी झपारेर पठाए...
देउवाले चण्डेश्वरलाई त ‘तपाईँ धेरै चुरीफुरी नगर्नूस्, प्रचण्डले उचालेका भरमा’ भनेका थिए ।त्यस्तै शम्भु थापालाई पनि देउवाले झपारेका थिए । उनको भनाइ थियो- ‘तपाईँ धेरै नमात्तिनूस् । माधव नेपालजीलाई पनि सम्झाउनूस् । यो काम मैले गरेर मात्र हुँदैन । ओलीजीले मान्नुपर्छ
२०७८ मंसिर ११, शनिबार १८:५७:००
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा टोली शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुग्यो । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की पनि थिए । वकिलहरुको भनाइ थियो, ‘अदालतका बेथितिको कुरा सबैतिर छताछुल्ल भयो । अब प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर राणालाई राखिरहेसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । राणा बस्न सक्ने कुनै ठाउँ छैन । उनलाई राखिरहेर समस्या बढ्दै गएको छ । हटाउनुपर्यो ।’
वकिलहरुले राणालाई संरक्षण दिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको तर्क गर्न थाले । राणालाई जोगाउन राजनीतिक नेतृत्व लागिररहे पार्टी र नेताहरुसमेत बदनाम हुने चेतावनी बार पदाधिकारीहरुको थियो । त्यसपछि देउवाले वकिलहरुको थप सातो लिए । उनले भने, ‘अदालतको समस्या अदालतबाटै समाधान गर्नुपर्छ । यसमा हामीले केही निर्णय गर्न सक्दैनौँ । मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । कतिपटक भन्नुपर्छ ? तपाईँहरुले भन्दैमा हुन्छ ? अहिले केही मान्छे विरोधमा देखिए भन्दैमा प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमाथि हामीले हात हाल्न मिल्छ ? यत्ति पनि थाहा छैन ? हस्तक्षेप गरिदिनुपर्यो भनेर यहाँ आउने ? आज चोलेन्द्रशमशेरका विरुद्धमा यसो गरे भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीशले कसरी काम गर्छ ? गलत नजिर बस्दैन ?’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राणाका विषयमा बोलिरहँदा देउवाले कुनै जवाफ फर्काएका थिएनन् । उनले मुन्टो मात्र हल्लाए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बोल्दाबोल्दै देउवाले ‘म चितवन जानु छ’ भन्दै छिटो कुरा सक्न भनेका थिए । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले लामो कुरा गर्न खोजेपछि देउवा थप झोँकिएका थिए । उनले भने, ‘अहिले अदालतको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले वा सरकारले केही निर्णय गर्न सक्दैन । तपाईँहरु चुप लागेकै राम्रो । यदि चोलेन्द्रशमशेर राणा विवादित भए र उनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो भने अरु विवादित न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । विवादितजति कोही बस्नुहुन्न । हरेक न्यायाधीशका बारेमा विवादका कुरा आएका छन् ।’
अरु बेला तीन वाक्यभन्दा बढी नबोल्ने देउवाले शुक्रबार बिहान भने केही बिस्तारमा कुरा गरेका थिए । देउवाले झपारेर बाहिर पठाएपछि वकिलहरु निन्याउरो र कालोनीलो अनुहार लगाएर निस्किएका थिए । बाहिर सञ्चार प्रतिनिधिहरु बसिरहेका थिए । वकिलहरुले आफूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका कुरा गरे । प्रधानमन्त्रीबाट भने ठोस जवाफ नभएको प्रतिक्रिया दिए । आफूहरुले राखेका कुरामा गठबन्धनको बैठक राखेर साझा धारणा बनाउने वचन पनि देउवाले वकिलहरुलाई दिए ।
वास्तवमा देउवाले राणाको बहिर्गमन चाहेका छैनन् । त्यही कारण गठबन्धनमा यो कुरा उनी लैजाने छैनन् । रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको राजनीतिक समन्वय समितिमा पनि यसबारे कुनै कुरा भएको छैन । त्यसैले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससहित प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि अदालतलाई गिँजोल्ने र अस्थिर बनाउने कुनै निर्णय नगर्ने पक्षमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा बारले मात्र कुर्लेर केही नहुने देउवाले स्पष्ट संकेत गरेका छन् । साथै देउवाले जनताको न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध नपुर्याउन भन्दै आन्दोलनका नाममा अदालतमा चलिरहेको अराजकता बन्द गर्न समेत ‘निर्देशन’ दिएका थिए ।